रिक एलियास: मेरो हवाइजहाज दुर्घटनाग्रस्त हुदा मैले सिकेका ३ वटा कुराहरू - English-Video.net
एउटा ठूलो विस्फोटनको कल्पना गर्नुहोस
जब तपाई ३००० फिट उचाईंमा हुनुहुन्छ |
एउटा धुवाँको मुस्लोले ढाकिएको हवाइजहाजको कल्पना गर्नुस |
एउटा इन्जिनको कल्पना गर्नुहोस् जुन कराउँदैछ – क्लाक, क्लाक, क्लाक
क्लाक, क्लाक, क्लाक, क्लाक
यो एकदम डरलाग्दो हुन्छ ।
म एउटा गजबको सिटमा थिएँ । म १घ (1D) मा बसेको थिएँ ।
म नै एउटै मानिस थिएँ जो जहाजको परिचारिकासँग कुरा गर्न सक्थ्यो ।
मैले उत्तिनै खेर उनीहरूलाई हेरे ।
र उनीहरूले भने, “कुनै समस्या होइन । हामीले कुनै चरासँग ठक्कर खाएको हुनुपर्छ ।”
चालकले जहाज घुमाइसकेका थिए,
र हामी धेरै टाढा पनि थिएनौ ।
म्यानहटन देख्न सकिन्थ्यो ।
दुई मिनेट पछि,
तीन वटा कुराहरु एकैसाथ भए ।
विमान चालकले जहाजलाई हड्सन नदी तिर सोझ्याए ।
त्यो नियमित बाटो थिएन ।
उनले इन्जिनहरु बन्द गरे ।
अब कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं यस्तो जहाज भित्र हुनुहुन्छ जुन बाट आवाज आइ राखेको छैन।
र उनले तीन वटा शब्द भन्छन – –
मैले अहिलेसम्म सुनेका मध्य कठोर शब्दहरु
र उनी भन्छन, “नराम्रो परिणामको लागि तयारी गर ।”
मैले जहाज–परिचारिकाहरूसँग अब कुरा गरिराख्नु परेन ।
मैले उनको आँखा पढ्न सक्थे ।
त्यो भयानक थियो । जीवनको समाप्ति ।
अब मैले त्यो दिन सिकेका ३ वटा महत्वपूर्ण कुरा तपाईंहरूलाई सुनाउँदैछु ।
मैले सिके कि सबैकुरा निमेषभरमा परिवर्तन हुन सक्छन् ।
हामीसँग एउटा लामो सुची छ,
हामी यी कुराहरु आफ्नो जीवनकालमा गर्न चाहन्छौं,
मैले जीवनमा भेट्न चाहेका तर नभेटेका मानिसलाई सम्झे ।
ती सारा बिग्रेका कामहरु जसलाई म सच्याउन चाहन्थे,
मैले लिन चाहेर पनि लिन नसकेका सबै अनुभवहरु ।
जब मैले यी सबैको बारेमा पछि सोचें,
म यो निर्णयमा पुगे
कि, "मैले गलत रक्सी जम्मा पारिरहेको छु ।"
किनकि जब रक्सी तयार छ र कोही त्यही छ – म रक्सी खोल्दै छु ।
अब म कुनै पनि कुरालाई थाँती राख्न चाहन्न ।
र त्यो आकस्मिकता, त्यो कारणले
मेरो जीवनलाई साँच्चै नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।
मैले त्यो दिन सिकेको दोस्रो कुरा ––
र यो हामीले जर्ज वासिङ्टन पुललाई खाली गर्नु जस्तै हो,
जुन त्यति ठुलो कुरा पनि होइन---
म प्रफुल्ल भए ।
मलाई साँच्चै नै एउटा पश्चाताप महसुस हुन्छ ।
मैले एउटा राम्रो जीन्दगी बाँचेको छु ।
मेरो आफ्नै मानवता तथा गल्तीहरूको सँगै
मैले प्रयास गरेका हरेक चीजमा राम्रो हुन प्रयास गरेको छु ।
तर मेरो मानवतामा,
म मेरो अहमलाई पनि स्वागत गर्छु ।
र मैले व्यर्थै खेर फालेको समय सोचेर पश्चाताप गरे
जुन काम ती आवश्यक थिएन
ती मानिससँग जुन महत्वपूर्ण थिए ।
र मैले सम्बन्धहरूको बारेमा सोचें मेरी पत्निसँगको,
मेरा साथीसँगको, मानिसहरूसँगको ।
र त्यसपछि, जब मैले त्यस विषयलाई लिएर आफैलाई ऐनामा हेरे,
मैले मेरो जीवनबाट नकरात्मक उर्जालाई उत्सर्जन गर्ने निर्णय गरे ।
यो सबै हिसाबबाट उपयुक्त त छैन, तर धेरै राम्रो चाही छ ।
मैले यो २ वर्षमा आफ्नी पत्निसँगै कहिल्यै झगडा गरेको छैन ।
बडो आनन्दको महसुस हुन्छ ।
म अबदेखि सही हुन चाहन्न,
बस! खुसी रहन चाहन्छु ।
मैले सिकेको तेस्रो कुरा– –
यो तपाईंको दिमागी घडी जस्तै हो
चलिरहन्छ, “१५”, “१४”, “१३”
तपाई पानी आइरहेको देख्नु हुन्छ ।
म भन्छु, “कृपया मलाई बगाएर लैजाउ” ।
म यसलाई २० टुक्रामा विभाजन गर्न चाहन्न
तपाईहरूले त्यो वृत्तचित्रमा देखे जस्तो ।
जब हामी तल आउँदैछौं,
मलाई रमाइलो अनुभव भयो ।
मर्नु डरलाग्दो छैन ।
यो त हामीले जीन्दगी भरि गरिरहेको तयारी जस्तै छ ।
तर यो धेरै दुःखदायी चाही थियो|
म जान (मर्न) चाहन्न थिए, म मेरी पत्निलाई प्रेम गर्छु ।
अनि त्यो दुःख
एउटा सोचमा परिणत भयो
जुन कुरा, मैले एउटै मात्रै चाहना गरे|
मैले चाहे की म मेरा छोराछोरीहरू बढेको देखुँ ।
त्यसको लगभग एक महिना पछि, म मेरी छोरीको (कला) प्रस्तुतिमा थिए ।
एक कक्षाकी छात्रा, त्यस्तो धेरै प्रतिभावान कलाकार त होइन ...
... तरपनि ।
म कराउदैछु, रूदैछु,
सानो बच्चा जस्तै
र यी सबै कुरा गर्नु मलाई निकै सान्दर्भिक नै लाग्दै थियो
त्यस क्षण मैले यो कुरा महसुस गरे कि
ति दुई वटा आयामहरू लाइ जोडेर
एउटै कुरा जुन मेरो जीवनमा महत्वपूर्ण छ--
त्यो भनेको एउटा राम्रो पिता हुनु हो ।
त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, महत्वपूर्ण कुरा,
मेरो जीवनको एउटै मात्र उद्देश्य भनेको
एउटा राम्रो पिता बन्नु हो ।
मलाई एउटा चामत्कारिक उपहार प्राप्त भएको छ
त्यो दिन नमर्नु
मलाई अर्को पनि उपहार प्राप्त भएको छ,
जुन चाही भविष्य देख्न सक्ने हुनु हो
अनि त्यहाँबाट फर्केर आउने
तथा फरक जीवन जिउने हुन सक्नु हो ।
म तपाई आज उडिरहनु भएका साथीहरूलाई चुनौति दिन्छु,
सम्झनुहोस कि तपाईहरूको जहाजमा पनि त्यहि कुरा भयो ।
तर कृपया नसम्झनुस्
अनुमान गर्नुहोस, तपाईमा कस्तो परिवर्तन आउने थियो ?
तपाईले के काम सम्पन्न गर्नुहुन्थ्यो, जुन तपाईंले थाती राख्नु भएको थियो
किनकि तपाईंलाई लाग्छ तपाईं सधै यही रहिरहनु हुनेछ ?
तपाईं कसरी सुधार गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो सम्बन्धहरूलाई
तथा सम्बन्धमा भएका खराब तत्वहरूलाई ?
र सबै भन्दा ठूलो कुरा, तपाईं सकेसम्म उत्तम अभिभावक बनिरहनुभएको छ ?
Translated by JP Koirala
रिक एलियास: मेरो हवाइजहाज दुर्घटनाग्रस्त हुदा मैले सिकेका ३ वटा कुराहरू | TED Talk | TED.com